ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၁)
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၁)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jan 28, 2013 in Photography, Travel | 16 comments
ကရင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ် ကျောက်ကလပ်တောင်
လတ်/လောင် 16.81827, 97.64056 မှာတည်ရှိပါတယ်.. (လတ်လောင် ဘယ်လိုကြည့်မလဲ မသိရင် ဂျီင်္အိုတက် မှာကြည့်ပါ)
ကျွန်တော်ရဲ့ ဘားအံခရီးစဉ် ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၀) မှာ ဘားအံကို ရောက်ရှိပြီး ရေမိုးချိုးစားသောက် အရင်ဆုံး ကျောက်ကလပ် တောင်ကိုသွားကြပါတယ်.. ကျောက်ကလပ်တောင်ကတော့ ကလပ်ပုံစုံ ဖြစ်နေတဲ့ ကျောက်တောင်ဖြစ်ပါတယ်.. ရှင်းရော
ကန်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာ ကျွန်းပုံစံ ရှိနေတာဖြစ်ပြီင်္း တံတားထိုးထားပါတယ်.. တံတားကနေသွားပြီး ကျောက်တောင် ကို တက်လို့ရပါတယ်.. ဘုန်းကြီးကျောင်း လဲရှိပါတယ်..
ကျောက်တောင်ထိပ်မှာ စေတီလေးတည်ထားပါတယ်.. တ၀က်လောက်အထိ တက်လို့ ရပြီး တောင်ကလပ် ထိပ်ကိုတော့ တက်လို့မရတော့ပါဘူး. လှေခါးလေးကိုတော့ ကပ်ပြီးထောင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်..
[ကော့လှိုင်ကျေးရွာတွင် တည်ရှိ၍ သံလွင်တံတားနှင့် ၃ ဖာလုံ သာသာဝေးပါသည်။ သမိုင်းဝင် ဆံတော်ရှင်တဆူလည်း ဖြစ်သည်။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ထင်ရှားသော ဆံတော်ရှင်တဆူလည်း ဖြစ်သည် ခုကျောက်ကလပ်စေတီကို ဦးဆောင်ပြီး ပြန်လည်မွန်းမှန်နေသော ဆရာတော်ဦးဝိမလသည် သာမညတောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ မြေးဖြစ်သည် ကျောက်ကလပ်ကို ဘုရားဖူးလာသော ဧည့်သည်များကို ကျောက်ကလပ်မှာ ကုသိုလ်ယူဘုရားဖူးရင်း သက်သတ်လွတ် ထမင်းဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးလျှက်ရှိပါသည်။ Credit နေစိုးမင်း http://naysoemin.blogspot.com ] စားတော့မစားလာခဲ့ပါဘူး။
၃။မြင်၇တဲ့ အောက်ပိုင်းက စေတီလေးတွေနားထိ တက်လို့ရပါတယ်။ (ပုံ-၈)ဟာ ဘယ်ဖက် အစွန် ဆုံးက စေတီလေးဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ-၉) ဟာ ညာဖက် မှာ မြင်၇တဲ့ စေတီလေး ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ-၁၀ ) ဟာ ဘယ်ဖက် စေတီလေးနဲ့ ကျောက်တောင် ကြားက ရိုက်ထားတာပါ
၁၄။ကိုရင် ၂ ပါးနဲ့ ကျောက်ကလပ်
ကျောက်ကလပ်တောင်ကနေ ၁၁ နာရီမှာ ဇွဲကပင်တောင်ကို ဆက်လက်ချီတက် ကြပါတယ်……. ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၂) မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ်..
ကျောက်ကလပ်ကို မရောက်တာ ၁၀ နှစ်ကျော်သွားပါပြီ
အရင်ကတော့ခနော်ခနဲ့  သစ်သားတံတားလေးပါ
ထမင်းစားပြီးရင် ထုရတဲ့ မောင်းကြီးရောရှိသေးလား
မှတ်မိနေတာကတော့နှမ်းဖတ်ချဉ်နဲ့  လုပ်တဲ့  သက်သတ်လွတ်ငံပိရည်က
တကယ့် ငံပိရည်အတိုင်းပါပဲ ……..
ဟို စေတီလေးကို ရောက်ဖို့ လှေကားလေးက ဝါးလှေကားလား။
ကိုယ့်တာဝန်ကို ယူနိုင်မှ တက်ပါ ဆိုတာမျိုးလား။
ဓာတ်ပုံတွေ လှတယ် ဆြာအုပ်။
Second Last (B/W) ပုံ ကို ကြိုက်တယ်။ :hee:
နံပတ် (၇) က ကျီးကန်းပုံလေးက ဒေါင်းနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်နော်။
စာအုပ်ရေ ကျုပ်လည်းအခု ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရောက်နေပေမယ့်
ယခုနေရာတွေကိုတော့ဖြင့် မရောက်ဖူးသေးဘူးရယ် ကရင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်က
ဘယ်အထိများဆက်မှာလဲဗျ။ ဘာအံရောက်နေတာဆိုတော့ ကျုပ်ကအခု မြ၀တီမှာ
ရောက်နေပါတယ်။ မြ၀တီလာဖို့ အစီအစဉ်လေးဘာလေးရှိရင်လဲ လုပ်ပါ့အုံး။
မောင့်ကျက်သရေခေါင်းပေါင်းနဲ့ မြန်မာဆန်းလွန်းလှသူ ကိုစာအုပ်ကို အပြင်မှာတွေ့ဖူးချင်လို့ပါ။
၃ ခွက်မရတော့ဘူးဗျ ခုနဲနဲ လစ်မစ်တက်လာပီ
ဂဒါရီကိုစာအုပ်ရေ မြ၀တီကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ယိုးဒယားဖုန်း
၀၈၂၇၉၄၂၅၄၃ ကိုဆက်လိုက်ပါခင်ဗျ။ ကျုပ်က မဲဆောက်ဖက်မှာနေတာများလို့ပါ။
ဆင်းကဒ်တစ်ခုမှ ထောင့်ငါးရာလောက်ပဲ ပေးရမှာပါ။ ကျုပ်ကြားရာအရပ်ကနေ အမြန်ဆုံး
ပုံလေးတွေ လှလိုက်တာ …
ကျီးကန်းကြီးလည်း လှထှာအေ …
ကျောက်ကလပ်မှာ အထက်တက်တဲ့လှေကားက တက်ရမှာကြောက်စရာကြီး
အိုက်ကို တစ်ခါမှ ရောက်ဖူးသေးဘူး …
သူဋ္ဌိန်းဂျီးဖစ်မှ သွားရအုံးမယ် ..
ချာအုပ် ပုံတွေကတော့ ..
ပြောစရာ မလိုလောက်အောင်ပဲ ချယ်ဖစ်ပီးသားဘာဗျို့ …
ရွှေရင်မျှော်ဘုရားက တစ်ပုံထဲ တင်ထားတယ် ဒီမှာ http://myanmargazette.net/163297/travel
ကျုပ်လေ ~~~~ ကျုပ် .. … ……… ဘားအံ ပုံတွေ မကြည့်ချင်ဘူးဗျာ (စိတ်နာလို့) . .. . . . .. . အဲ့ဒါ လာပြောတာ …………… အမှန်ကတော့ မနာလို တာ ပေါ့ဗျာ . . .. .. အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ
အောက်ဆုံးက ရေပေါ်မှာ ကျောက်ကလပ်တောင်ပုံပါ ပါအောင် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံ ကို သဘောကျ ကြိုက်ပါကြောင်း